သင်္ကြန်တွင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ အရက်သေစာသောက်စား မှု ဆွေးနွေးချက် « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » သင်္ကြန်တွင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ အရက်သေစာသောက်စား မှု ဆွေးနွေးချက်
သင်္ကြန်တွင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှု နဲ့ အရက်သေစာသောက်စား မှု ဆွေးနွေးချက်. အသံဖိုင် နားထောင်ရန်နှင့် ရယူရန် နားထောင်ရန် အသံဖိုင်ယူရန် http://vocaroo.com/i/s0T5zihXJPo8 ပြီးဆုံးသွားတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ အရက်သေစာ သောက်စားရမ်းကားမူတွေအကြောင်း ဝေဖန်ရေးသားချက်တွေကို ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲက အင်္ဂပူမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြဝင်းနဲ့ Burma Democratic Concern အဖွဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးသိန်းတို့နဲ့အတု ဦးခင်မောင်ညိန်းက တင်ပြဆွေးနွေးထားပါတယ်။
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 20/04/2015 .
← #Burma Democratic Concern (BDC) မှ ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးထိုက်တန်သိန်းနှင့် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းဌာန ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့မှုများ	ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန်သဘောဖြင့် ဝေဖန်သူများကို အရေးယူမည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန် | 7Day Daily – ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ →